Zvinhu zvose zvisingaenderani nezvinoda Mwari chitadzo, kusanganisira chitadzo chokutanga uye nezvakaipa zvose zvatakaita muhupenyu hwedu hwose.
MuchiGiriki chitadzo vanochidaidza vachichiti ‘hamartia’ uye shoko iri rinobva pashoko rinoti ‘hamartano’ Zvichireva ‘kupotsa pawakananga.’ Zvino chitadzo chakaipisisa kusatenda muna Jesu nemazvo, uye kusava nechido chokuponeswa. Kusaziva kana kutenda muchokwadi kuita chitadzo chokusateerera uye kunyepa pamberi paMwari.
Kana tisingadi zvechokwadi kuita chitadzo chakadai pamberi paMwari tinofanira kunzwisisa mashoko ake nemazvo uye kurangarira kuti Jesu akava muponesi wedu.
Tinofanira kutenda mukubhabhatidzwa kwaJesu nemuchinjikwa wake kuburikidza nemashoko aMwari. Chitadzo kugashira shoko raMwari, kubva pachokwadi chake uye kutenda mune zvisiri zvemazvirokwazvo, zvisina kumboitika.
Bhaibheri rinotitaurira kuti chitadzo chakaipisisa, ‘chitadzo chinoendesa kurufu’ (1 Johane 5:16) kusatenda kuti Mwari akashambidza zvitadzo zvose zvapasi rino. Tinofanira kutenda mukuzvarwa kwaJesu, mukushambidza zvitadzo nokubhabhatidzwa kwake uye nokutipa hupenyu neropa rake pamuchinjikwa. Chinotova chitadzo kana munhu akasatenda mumashoko akanyorwa ekuti, Jesu akabhabhatidzwa, akatifira pamuchinjikwa uye akamutswa kuti atisunungure kubva muzvitadzo zvedu zvose.